Fumana uhlobo lohlobo olufunekayo kuyilo lwakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Fumana uhlobo lohlobo olufunekayo kuyilo lwakho
I-typography yinto esisiseko kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi ezibonakalayoNanini na xa sifuna ukuhambisa umyalezo sisebenzisa iileta, kuyakufuneka senze njalo ngendlela ehambelana noko sikufunayo. Njengokuba umfanekiso udlulisa umyalezo ngendlela ethile, uhlobo lochwethezo lwenza into efanayo. Ngesi sizathu cUkwazi iifonti kunye neentsingiselo zazo zizinto ezisisiseko kuyilo.
Fumana uhlobo lohlobo olufunekayo kuyilo lwakho usebenzisa i Isixhobo esiza kukuvumela ukuba wazi amagama ngqo weefonti ulayishe umfanekiso apho ungabona khona ukuba typography. Singahamba esitratweni kwaye sifumane uhlobo oluchanekileyo loyilo lwethu kodwa singazi ngokupheleleyo ukuba ngubani igama lazo, ezi ntlobo zezixhobo ziya kusinceda ukusombulula ezi ngxaki. Ayisiyiyo yonke into ekhangelo kodwa ukudibanisa enye nenye, sinokuyifumana ezinye izixhobo ezisinceda sibe nomfanekiso-ngqondweni weentlobo ezahlukeneyo zeefonti zidityaniswe kunye.
Bonke abayili ngaxa lithile ebomini bethu Sibonile uhlobo oluthile lochwethezo Ipholile kakhulu esiyibonayo kuyilo oluthile esitratweni kodwa sishiywe sinomnqweno wokuyisebenzisa kuba asilazi igama lakhe. Namhlanje zinezixhobo ezitsha esinokuzifumana Internet, eli tyala alisengongxaki, izixhobo ezinje nge Yintoni ivumela ukuba sazi igama lefonti ngokufaka ifoto yena. Indlela ekhawulezayo nelula yokwazi ukuba yeyiphi ifonti esiyithandayo kakhulu.
Ayizizo zonke izinto ezifumanekayo typography ngokugqibeleleyo, kufuneka sazi nokuba kanjani zidibanise ukuze isicatshulwa sethu sisebenze kakuhle. Sonke sinamawaka eefoto kwiikhompyuter zethu kwaye xa sifuna ukwenza uyilo kunokuba sisiphithiphithi ukuthatha isigqibo sokuba ukhethe eziphi, ngenxa yesi sizathu kuluncedo ukusebenzisa inkqubo ye uboniso lwefonti online oko kusivumela ukuba dibanisa iifonti ubone ukuba zikhangeleka njani. Kwinethiwekhi singafumana izixhobo ezininzi ukulungiselela le njongo kodwa kule meko siya kuhlala nomsindisi wethu omkhulu Uphando. la sixhobo Imigca ye Google Isivumela ukuba sidibanise iifonti kwaye sibone ukuba zijongeka njani ngokukhawuleza nangokulula.
Thatha isigqibo sokuba zeziphi iifonti oza kuzisebenzisa kwaye utshintshe iiparameter ngokukhawuleza enkosi Imigca ye Google, unokwazi ukujonga ulwazi malunga ne-typography kunye nokusetyenziswa kwayo kwihlabathi. Ukuba ucinga ukwenza naluphi na uhlobo loyilo apho uhlobo lokuchwetheza luyinto esisiseko, kuya kufuneka uqale ngokusebenza ngesi sixhobo singakholelekiyo esisifumana kuGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Fumana uhlobo lohlobo olufunekayo kuyilo lwakho